လျှော့ဈေးလက်မှတ်များစွာရောင်းချပေးမယ့် B&F Food Fair Live အစီအစဉ်စတင်ပါပြီ...
Special Promotion အသေးစိတ်
ကြီးကျယ်ခမ်းနားလှတဲ့ မန္တလေးမြို့တော်ကိုရောက်ရှိတဲ့ အချိန်တိုင်း ဈေးနှုန်းအသင့်အတင့်နဲ့ အစစအရာရာ အဆင်ပြေတဲ့ hotel မတွေ့လို့ စိတ်ရှုပ်နေရပြီလား?
ဒါဆိုရင်တော့ Location is Heart of Mandalay လို့တင်စားရလောက်အောင် ရွှေမန္တလာမြေ ရဲ့ သမိုင်းဝင်အမွှေအနှစ်ဖြစ်တဲ့ မန္တလေးကျုံးနဲ့ အနီးစပ်ဆုံး၊ မြို့ရဲ့အချက်အချာအကျဆုံး နေရာမှာတည်ရှိနေတဲ့ Royal City Hotel နဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
မိသားစုလိုက်တစ်စုတစ်ဝေးထဲ တည်းခိုချင်တဲ့သူတွေအတွက်ရော၊ သူငယ်ချင်းတွေ၊ မိတ်ဆွေတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါးတည်းခိုချင်တဲ့ သူတွေအတွက်ပါ စိတ်အေးချမ်းသာစွာနဲ့ တည်းခိုနိုင်တဲ့ မန္တလေးမြို့ရဲ့ ဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံး hotel တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဈေးနှုန်းချိုသာပြီး ဝန်ဆောင်မှုကောင်းတဲ့အပြင် B&F Clubcard လေးနဲ့ဆို discount တွေပါရဦးမှာဆိုတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းလဲနော်။
ဒါ့အပြင် B&F Clubcard ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ Superior room ဆို မူရင်းဈေးနှုန်း 43,000 ကျပ်ကို Book Myanmar Hotel မှာ B&F Clubcard ပြသပြီး ဘိုကင်တင်မယ်ဆိုရင်တော့ 37,999 ကျပ်၊ Superior Family room အတွက်ဆိုရင်တော့ မူရင်း 50,000 ကျပ်ကနေ 46,999 ကျပ် အစရှိတဲ့ အကျိုးခံစားခွင့်တွေရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
Royal City Hotel ဟိုတယ်အတွက် ပရိုမိုးရှင်းရယူပြီး ဘိုကင်ပြုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့…
Book Myanmar Hotel Address - No.391 Waizayantar Road, Thingangyun Township, Yangon
PH – 09969910121 , 09969910122 (Viber), 09895711223 (Hot Line)
B&F Clubcard အကြောင်းအသေးစိတ်သိရှိလိုပါကလည်း ဖုန်းနံပါတ် 099 69910115, 099 69910128ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်….
- ဒီပရိုမိုးရှင်းကိုတော့ Book Myanmar Hotel မှာ B&F Clubcard ကိုပြသပြီးတော့ ဘိုကင်တင်မှာသာလျှင်ခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်...
- ဒီပရိုမိုးရှင်းကိုတော့ 31. May . 2020 အထိသာအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်...
5% Off For Any Route
Jelly Bunny Myanmar မှာ B&F ClubCard နဲ့ဆို 10% Discount နော်“ချစ်စဖွယ်အသွင်ကိုဖော်ဆောင်ပေးမယ့်
15% Discount For Main Dishes
စားပြီးတိုင်း ထပ်စားချင်နေမယ့် Homemade Ramen